ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိ ကြောင်းကြွားလုံး ထုတ်လိုက်ပြီး သူ့ကို ဖြုတ်ချ လိုက်ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့ သူတွေကို သူ့ဝင်ငွေသိရင်ရူးသွားလိမ့် မယ်လို့ဆို တဲ့ဖေ့ဘုတ် ဆယ်လီနေဆန်း….. – Shwe Naung
ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိ ကြောင်းကြွားလုံး ထုတ်လိုက်ပြီး သူ့ကို ဖြုတ်ချ လိုက်ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့ သူတွေကို သူ့ဝင်ငွေသိရင်ရူးသွားလိမ့် မယ်လို့ဆို တဲ့ဖေ့ဘုတ် ဆယ်လီနေဆန်း…..
ဖ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီ နေဆန်းကတော့ ..သူများနဲ့ မတူတမူထူးခြားတဲ့ ..ဟာသလေးတွေ တင်ဆက်ရင်း လူသိများလာခဲ့ တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။..လှပတဲ့ မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆို တွေကြောင့် လူအများရဲ့အားပေးမှုကို…
ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ..ထို့ပြင် နေဆန်းက ပရိသတ်တွေ အားပေး မှုကြောင့် ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေ များဖြင့် ..သိန်းထောင်ချီ တန်သော အိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်.. ဆောက်လုပ်… နေထိုင်လာနိုင် လာခဲ့ပါ တယ်
နေဆန်းက.. လက်ရှိ မှာတော့ ..သူဝါသနာ ပါတဲ့အလုပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ် တွေရဲ့အားပေးမှု ကိုရရှိကာ.. အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဆွတ်ခူး နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.. နေဆန်းကလည်း သူ့ရဲ့အလုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံ ထားရချိန်တောင်မှ ..မနားပဲ ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ လုပ်ကိုင်နေ လျက် ရှိပါတယ်။
နေဆန်းဟာ.. အာဏာသိမ်းခံထား ရတာတောင်မှ.. ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နေတာကြောင့် ပြည်သူ များရဲ့ …အပြစ်တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ.. အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ် မကြာသေးမှီကပဲ… နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာ များရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင် များကပရိတ်များ တောင်းဆို ချက်အရ
နေဆန်းနှင့် …ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကြော်ငြာများ ပိုစတာများ ကိုဖျက် ခဲ့ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင် းတောင်းပန်စာ….များရေးသားခဲ့ ကြပါသည်။နေဆန်းအပါအဝင်… ဖြူဖြူထွေး ဟာလည်း ယနေညတွင် ကြော်ငြာ များဖြုတ်ချ ခံခဲ့ရပါ တယ်။
နေဆန်းဟာ ယခုသူရဲ့… အကောင့် Mydays မှာ ပြည်သူ များကိုကျေးဇူး ကန်းသော…စာသားများကို တင်ထားတာ တွေ့ရပ်တယ်… သူတင်ထားတဲ့ စာတွေကတော့…
“အော် ပျော်နေ လိုက်ကြတာ ထိုင်းဘက် မှာငါငွေတွေ ဘယ်လို ငွေတွေ ဝင်နေလဲ ဆိုတာ သိသွားရင် ရူးသွားမယ်…ဒီလို ဝေဖန်မှုတွေ ကြောင့် အလုပ်လုပ်ဖို့ မပျင်းတော့ ဘူးညဘက် ထိုင်းဘက်က အလုပ်လာ အပ်တာ သိန်း 100 ကျော်”…
ထို့အပြင် နေဆန်းက မြန်မာတွေ အားမပေးလဲ ..ထိုင်းဘက်က ပရိသတ်များနဲ့… ထိုင်းရောက် မြန်မာ ပရိသတ်တွေ အခိုင်မာ ..ရှိကြောင်း သူတို့နဲ့ပဲ …အလုပ်ဆက် လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ထုတ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်… သူရေးသားခဲ့ တာကတော့ထိုင်းဘက်မှာ Videoတင်ဖို့ ..
သိန်းထောင်ချီတန်.. စာချုပ်များ ချုပ်လိုက် ပြီးထိုင်းသူဌေးမတွေ ရော သူ့အားပေးတဲ့ ..ထိုင်းက ..ပရိသတ် များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ ပါတယ်ဒါတင် မကသေးပဲ…. ဝေဖန်သူများ ဆွေ့ ဆွေ့ခုန်သွားအောင်သူ TikTokဆော့ဖို့ရယ်
Video… ရိုက်ကူးဖို့ အတွက်ေ နာက်ထက် …သိန်း4000 တန်ဖိုးရှိသောအလုပ် အိမ် အသစ်တလုံး ဆောက်နေ ကြောင်းကိုလဲ …တစ်ခါထဲ ထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့တာပါနော်…. နေဆန်း အပေါ်အမြင်လေးကိုလည်း မျှဝေခဲ့ ကြပါ အုန်းနော်။
အိချောပိုရဲ့ အလန်းစား ပုံလေးများ…
ငါကျေနပ် တယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ လှနေတဲ့ ယဉ်လက် ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို